Marka Ay Dhacday Amrita Singh Inee Inkirto Saif Ali Khan Waliba Sunny Deol Dartiisa! – Filimside.net
Marka Ay Dhacday Amrita Singh Inee Inkirto Saif Ali Khan Waliba Sunny Deol Dartiisa!
February 19, 2018 Ali Aadan
Saif Ali Khan iyo Amrita Singh waxay kamid ahaayen lamaanahi ugu caansan 90kii ayagoo caruur hader ka dhaxeyso.
Amrita iyo Saif waxa isku dhaleen Sara Ali Khan iyo Ibrahim Ali Khan sido kalena nolosha wey siku firaaqeyen oo hader waa kuwa kala tagay bilawgii qarnigan.
Hase Ahaate waxaa dib loo xasuustay xasuus hore iyo xili ay dhacday in Amrita Singh ay inkirto Saif Ali Khan Sunny Deol dartiisa.
Waxay ahed xili ay shaqo dhamaantoda ku guda jireen, waxaa casuumay oo u wacay Filmsameye Rahul Rawait si uu sawiro tijaabo ah oga qaado.
Director Rahul Rawait waxuu u wacay oo uu casuumay guud ahaan xidigihi uu lasoo shaqeyay sida Sunny Deol, Saif Ali Khan, Kajol Amrita Singh iyo kuwa kale oo badan si sawiro tijaabo ah uu oga qaado waxuuna xiligaas diyaarinaayey mashaariic kala duwan waxuu a xulaayey xidigaha uu aflaamtisa u dhiibi lahaa.
Hadaba waxaa goobta ku kulmeen markii ugu horeysya Saif Ali Khan iyo Amrita Singh oo ahaa kulankii kowaad ee wada qaatan waayahoda fanka iyo dhan shaqaba.
Amrita aqoon aye u lahed Saif waayo jilaa ayuu ahaa sido kale waxay ogeed in ay gabdhaha oo dhan ku waalnayen xiligaas xidigan sido kale Saif dhankiisa Amrita si wanaagsan ayuu u garanaayey balse waxaa dhacday Amrita inee inkirto Saif xiligaas ayadoo kasoo qaaday qof aanan waliged arkin ba xitaa maqlin.
Mar lamaanahan hore wareysi laga qaadayey waxay Amrita arinkaan ku sheegtay in aysan xiligaas la hadli Karin Saif sababto ah atoorahed kale ayaa dhankeda taagna oo fursad ay kula hadasho aye weysay Saif Amrita atooraheda kale inee magacawdo wey diiday markii la wareysanaayey oo ay qisadan ka sheekeyneysay.
Balse Saif oo akteda fadhiyay oo asna qisadan wax laga weydinayey ayaa halmar lasoo booday magaca Sunny Deol oo sheegayna in Amrita ay xiligaas u inkirtay Sunny Deol dartiisa.
Suuny Deol iyo Amrita waxay wada sameyee oo ay kusoo caan baxeen filmkii Betaab ee la daawaday sanadkii 1983 Blockbuster-kana noqday waxaana laisku xaman jiray inuu xirir jaceyl ka dhaxeyo lamaanahan balse been aye noqotay oo Amrita waxay bilawgii 90kii guursatay Saif Ali khan oo qalbiga ka xaday xidigtan.
war ali aadan ina adeer sidee bay kaa noqotay ma sany soel iyo saif ali khan ayaa lamaana ahaa oo caruur ka dhaxaysaa kkkkkkkkkkkkkk
war cusub keebaa female ahaa oo caruurta laga dhalay 2dooda kkkkkkkkkkkkkkkk please intaydnaan warka soo galin webka hala soo tifaf tiro sidaan web caalami ah kuma wanaagsana
Wax weyn ma ahan Saif iyo Amrita ayaa laga rabay waana laga dhigay.
Muhiimada waa ina la isi saxaa ee ma ahan in la isku qoslo sxb.